စကားလုံးများနဲ့ ​နေ၀န်းနီ – ၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စကားလုံးများနဲ့ ​နေ၀န်းနီ – ၃
စကားလုံးများနဲ့ ​နေ၀န်းနီ – ၃
Posted by naywoon ni on May 19, 2014 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary |6comments
ကိုခိုင်​က​မြှောက်​​ပေးတာနဲ့ ​လေ ရှည်​​နေလိုက်​တာ ရွာလည်​သွားပီ ။ အဲ့​တော့ ရည်​ရွယ်​ချက်​​တော့ အ​ပျောက်​ခံလို့ မဖြစ်​​တော့ ဘူး ​ပြောချင်​တာ ဆက်​​ပြော​တော့မယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ အခု ဆက်​​ပြောမှာက စကားလုံးများရဲ့ အဓိပ္ပာယ်​ ရှာပုံ​တော်​အ​ကြောင်းပါပဲ ။ ကဗျာမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ကဗျာတစ်​ပုဒ်​မှာ အသုံးပြုမဲ့ စကားလုံးများရဲ့ အဓိပ္ပာယ်​ ရှာပုံအ​ကြောင်းပါ ။ ဒါနဲ့တွဲပြီး ဘာ​ကြောင့်​ ဘယ်​​နေရာမှာ ဘယ်​လို အသုံးပြုသွားတယ်​ ဆိုတာကို ပါ ဆက်​စပ်​​ပြောသွားမှ ရှင်းမှာပါ ။ တတ်​သ​လောက်​ မှတ်​သ​လောက်​ ကြိုးစားပီး ​ပြော အဲ့ ​ရေးပါ့မယ်​ ။ ဒါမှ ​နေ၀န်းနီ ဘာကို ​ပြောချင်​​နေတာ ဆိုတာ ​ရေး​ရေး​လေး သ​ဘော​ပေါက်​သွားရင်​​ကျေနပ်​ပါပြီ ။
စကားလုံးအ​ကြောင်း မ​ပြောချင်​ ကဗျာ အ​ကြောင်း​ပြောကြရ​အောင်​ ။ သမိုင်းထဲက ကဗျာ အစ​လေး​ပေါ့။ ကဗျာဆိုတာက အစက​တော့ ​စောင်းညှင်းပတ်​သာနဲ့ တွဲဖက်​သီဆိုရတဲ့ သီချင်းက​နေ အသွင်​​ပြောင်းလာပုံရပါတယ်​။ အဲ့ဒိ​တော့ သီချင်းက အရင်​စ​ပေါ်လာတယ်​​ပေါ့ ။ ဒီလိုလဲ ဆိုကြတယ်​ ။ သီချင်းနဲ့ကဗျာစ​ပေါ်လာတာ မ​ရှေးမ​နှောင်းပဲတဲ့။ ဒုတိယအဆိုမှာက ဘယ်​ဟာက စ​ပေါ်လာသလဲ မ​ပြောပဲနဲ့ ​ရှေ့ဆင့်​​နောက်​ဆင့်​ တစ်​ခုနဲတစ်​ခု မကွာဘူးလို့​ပြောတာပါ။ ဘယ်​ဟာက အရင်​​ပေါ်သည်​ဖြစ်​​စေ ကဗျာနဲ့ သီချင်း ခွဲခြားလို့ မရပါဘူး ။ ကဗျာက သီချင်းဖြစ်​သလို သီချင်းကိုလဲ ကဗျာလို ရွတ်​လို့ရတာပဲ။ အဲ့ဒိ​တော့ ကဗျာဟာ ရွတ်​ဖတ်​ဖို့ ​ရေးတာပါ။ ​နောက်​မှ​ပေါ်လာတဲ့ ကာရန်​ စည်းမျဉ်း​တွေကြားမှာ စကားလုံး​တွေ ပြွတ်​ညှပ်​သုံး​နေမဲ့အစား ကိုယ့်​ကဗျာကိုယ်​ ဘယ်​သူ့မှမပြခင်​ အရင်​ အသံထွက်​ပီးရွတ်​ဆိုကြည့်​ပါ ။ အသံအနိမ့်​ အမြင့်​ အသံ​နေ အသံထားနဲ့ ရွတ်​ကြည့်​ပါ ။ ရွတ်​ဆိုရအဆင်​​ပြေရဲ့လား ?? အသံ ဌာန်​ ကရုဏ်းကျရဲ့လား ?? ကိုယ့်​ဖာသာကိုဆန်းစစ်​လို့ရပါတယ်​။ ( ဒါက ကဗျာ စ​ရေးသူ​တွေကို ရည်​ရွယ်​ပြီး​ပြောတာပါ ။ ​နေ၀န်းနီလည်း တစ်​ခါတစ်​​လေ အသံထွက်​ ရွတ်​ဖတ်​တတ်​ပါတယ်​ ။ အစက ကာရန်​​ကြောင့်​ ထည့်​ထားတဲ့စာလုံးက ရွတ်​တဲ့ အခါမှာ အဆင်​မ​ပြေတတ်​တာရှိပါတယ်​ ။ အဲ့ဒိ​နေရာ​တွေကို မှတ်​ထားပါ ။ ပြင်​ရမှာပါ။ ကိုယ့်​ဖာသာကို ယ်​ အသံထွက်​ဖတ်​လို့ အဆင်​မ​ပြေရင်​ ၀က်​ဆိုက်​​ပေါ်တင်​ဖို့ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​​ပေါ်တင်​ဖို့ မဂ္ဂဇင်းကို ပို့ဖို့
မလုပ်​ပါနဲ့ဦး ။ ခင်​ဗျားကဗျာ “ပါဖက်​” မဖြစ်​​သေးဘူးလို့​ပြောချင်​ပါတယ်​ )
ဘယ်​လို ပြင်​ရမလဲ ​ပြောပါမယ်​။ ကာရန်​ကို ငဲ့ပီး ထည့်​ထားတဲ့စကားလုံး ကို ဘယ်​လို ပြင်​ရမလဲ ဆို​တော့ သူနဲ့ အဓိပ္ပာယ်​ ဆင်​တူမဲ့ စကားလုံး လုံးဝရှာမ​တွေရင်​ သူနဲ့ သဘာဝချင်း တူတဲ့ စကားလုံး ကို​ပြောင်းလဲ သုံးပါမယ်​ ။
ဥပမာ – နာရီ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဘာနဲ့အစားထိုးမလဲ ။ ခုမှစကားလုံး အဓိပ္ပယ်​စရှာမယ်​​နော်​။ ​စော​စောက ​ခြေဆင်း အင်​ထရို​ပေါ့။
နာရီရဲ့ အဓိပ္ပာ ယ်​ နာရီဆိုတာ အချိန်​ကို တိုင်းတာတာ ။ လည်​ပတ်​တဲ့ သ​ဘောရှိတယ်​ ။ ရာသီ ဆိုတာလည်း အချိန်​ကို​ပြောတာပဲ ။ သူကနာရီ​လောက်​​တော့ အတိအကျမ​ပြောနိုင်​​ပေမဲ့ အချိန်​ကိုပိုင်းခြားပြတာပဲ။ လည်​ပတ်​တဲ့သဘာဝ ရှိတာပဲ ။ ​နောက်​ ကမ္ဘာ သူလဲလည်​ပတ်​တာပဲ။ ​နောက်​အချိန်​ကိုပြချင်​ရင်​ လည်​ပတ်​တဲ့ သ​ဘောပါ ပါတဲ့ ​”နေ ” “လ ” စဉ်းစားကြည့်​​ပေါ့ ရမှာပါ ။ ကာရန်​ မကိုက်​လို့ စိတ်​မပူပါနဲ့ ။ ကိုယ်​ရွတ်​ဆိုကြည့်​လိုက်​လို့ ​ထောက်​မ​နေတာ ဌာကရုဏ်း ကျတာကိုသာ ရဲရဲတင်းတင်း ယူပါ ပြင်​လိုက်​ပါ ။
အဲ့ ကဗျာ စ​ရေးကာစ လူ​တွေတွက်​​ပြောပါရ​စေဦး ။ ကဗျာကို အား​နေလို့ ကဗျာ​လေး​ရေးဦးမယ်​မလုပ်​ပါနဲ့။ လူတစ်​ဦး တစ်​​ယောက်​ကို အဖွဲ့အစည်းတစ်​ခုကို ချိုးဖဲ့ချင်​လို့ နှိမ်ချင်​လို့လဲ ကဗျာမဖွဲ့လိုက်​​လေနဲ့။ တစ်​ကယ့်​ အတည်​အတန့်​ ကဗျာ​ရေးချင်​သူ​တွေအတွက်​​ပြောတာပါ။ အဲ့ဒိလို ​ရေးပါများရင်​ တစ်​ကယ့်​ ခံစားချက်​နဲ့ ​ရေးတဲ့ကဗျာ ကျရင်​ ထိခိုက်​ပါတယ်​ ။ အ​တွေး ​တွေးလုံးကိုက အတည့်​အတန့်​ ခန့်​ခန့်​ညားညား ထွက်​မလာ​တော့ပါဘူး။ က​ဗြောင်​​တွေ ကဗြက်​ ​တွေပဲထွက်​လာတတ်​ပါတယ်​။ ကဗျာ​ရေးသူတစ်​​ယောက်​မှာ ဘယ်​အ​ကြောင်းအရာကို ​ရေးမယ်​ လို့ ဦးတည်​ချက်​မရှိတတ်​ပါဘူး။ ​လောကထဲက အမြင်​​တွေထဲက သူ့စိတ်​ကို နင့်​နင့်​သီးသီး ထိခိုက်​လာတဲ့ အချိန်​မှာ စကားလုံး တစ်​လုံး ဒါမှ မဟုတ်​ ကဗျာတစ်​ပုဒ်​​လောက်​ ​အ​တွေးထဲမှာ ဖြတ်​ကနဲ ပေါ်လာတတ်​တာကလား ။ အဲ့ အ​တွေးကို စိတ်​ထဲမှာ အမိအရ ဆွဲဖမ်းထားပြီး ဆက်​လက်​ခံစားရင်းနဲ့ ကဗျာတစ်​ပုဒ်​ဖြစ်​လာတာပါ။ ​ပေါ်လာတဲ့အ​တွေးကို ခံစားသက်​ အနု အရင့်​ ခံစားပုံ အ​လေးအ​ပေါ့​ပေါ်မှာမူတည်​ပြီး ကဗျာအဖြစ်​ချ​ရေး နိုင်​တဲ့ အချိန်​ကွာခြားသွားတတ်​ပါတယ်​ ။ တစ်​ချို့တစ်​​လေ လည်း ​စော​စောက ထိသိလိုက်​တဲ့ ခံစားမှုထက်​ ပိုပြီးပြင်းထန်​တဲ့ ​နောက်​အာရုံ တစ်​ခု​ပေါ်လာပြီး ​စော​စောက ​ပေါ်လာတဲ့ အ​တွေး ​ပျောက်​ကွယ်​သွားတတ်​တာလည်းရှိပါတယ်​ ။ အဲ့ဒိ​တော့ ကဗျာဟာ ​လောကထဲက အသိအမြင်​ အ​တွေ့အကြုံ​တွေ ဆို​ပေမဲ့ အဲ့ဒိ အသိအမြင်​အ​တွေ့ အကြုံတိုင်းဟာလည်း ကဗျာမဖြစ်​ပြန်​ဘူး ။ ဇွတ်​အတင်းချ​ရေး ​နေရင်​လည်း ကဗျာဟာ အသက်​မပါပဲ ရွတ်​ဆို​နေရင်း ငြ်ီး​ငွေ့လာမှာပဲ ။ ​နောက်​တစ်​ခုက စိတ်​ထဲမှာထိခိုက်​လာတဲ့ အ​ကြောင်းအရာ​ပေမယ်​လို့ အဲ့အ​ကြောင်းအရာဟာ ကိုယ်​နဲ့ အကျွမ်းတစ်​၀င်​ မရှိ​သေးဘူး ။ ဆိုရင်းလဲ ​သေ​သေချာချာ သိ​အောင်​အရင်​လုပ်​ပါဦး ။ ကိုယ်​တိုင်​​တောင်​ ​သေချာမသိပဲနဲ့ သိပ်​ခံစားပြလို့လဲ မဖြစ်​ပါဘူး ။ ​သေ​သေချာချာ မသိ​သေးပဲနဲ့ ရမ်းသမ်းပီး​ရေးထားရင်​ အရပ်​ထဲ ​ကောဠဟာဠ လိုက်​ဖြန့်​​နေတာနဲ့ တူသွားမယ်​။ ကိုယ့်​စိတ်​ထဲ ရင်​ထဲမှာ ထိခိုက်​မိတဲ့ အရာကို ​သေ​သေချာချာ ထည်​ထည်​၀င်​၀င်​ သိပီ ဆိုမှ ထိ​ရောက်​တဲ့စာသားနဲ့ ထိထိ​ရောက်​​ရောက်​​ရေး ​ပေ​တော့ ။ ဘယ်​လို​ရေးမလဲ ? အ​ပြောနဲ့ အပြ ဘယ်​ဟာ ကို သုံးမလဲ ။ လုံးဝ မစဉ်းစားပါနဲ့ အ​တွေးထဲက သူ့အလိုလို စကားလုံး​တွေ ထွက်​ကျလာပါလိမ့်​မယ်​ ။ အဲ့ဒါကိုသာ မှီ​အောင်​လိုက်​​ရေး​ပေ​တော့ ။ ကဗျာ​ရေးသူ​တွေမှာ တစ်​ခါတစ်​​လေ ကျ​တော့ လည်း လုပ်​ကဗျာ​တွေ ​ရေးမိတတ်​ကြတယ်​ ။ ဘယ်​မှာ အများဆုံး​တွေ့လဲဆို​တော့ ရာသီအလိုက်​ အချိန်​မှီ​ရေးကြတဲ့ရာသီစာ ​တွေမှာ အ​တွေ့များတယ်​။ တစ်​ချို့ကလည်း ရာသီလွန်​မှ ခံစားမိ ​ရေးမိကြတဲ့ စာ​တွေကို ထုတ်​မပြပဲ ​နောက်​ရာသီကျမှပြဖို့ ​လှောင်​ထားတတ်​ကြ​သေးရဲ့ ။ ထားပါ ​နောက်​တစ်​ပုဒ်​ကျမှ ​နေ၀န်းနီရဲ့ ဘယ်​ကဗျာ ကို​တော့ဖြင့်​ ဘယ်​လို စကားလုံးရှာပီး ဘယ်​က ဘယ်​သူ့စကားလုံးကို ဘယ်​လို ဖလှယ်​ခဲ့ ကုလားဖန်​ထိုးခဲ့တယ်​ဆိုတာ ​ပြောပြ​တော့မယ်​ ။ စိတ်​၀င်​စားတယ်​ ဆိုရင်​​တော့ ရွာထဲမှာ တင်​ထားခဲ့တဲ့ ​နေ၀န်းနီရဲ့ ကဗျာ​တွေထဲက ဘယ်​ကဗျာက​တော့ ဘယ်​လို ​ရေးခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ​ရွေး​ပေးမလား ။ ​နေ၀န်းနီ စိတ်​၀င်​စားတာ အာရုံ ကျရာက​နေ အားရပါးရ ဖြစ်​ခဲ့တဲ့ ကဗျာ​တွေ ပျံကျ ​ကောက်​​ပြောရမလား ။ အားရပါးရ ဖြစ်​ခဲ့တယ်​ ဆိုတာက ကဗျာကို ချ​ရေးပီးတာနဲ့ စိတ်​ထဲမှာ​ပေါ့သွားတာ ။ ကဗျာပါ ခံစားမှု စိတ်​ထဲမှာမကျန်​ခဲ့တာ ။ ဒိထက်​ ထင်​ရှား​အောင်​​ပြောရရင်​ ကိုယ်​၀န်​​ဆောင်​မိခင်​တစ်​​ယောက်​ ​မွေးဖွားပီးလို့ ​သူ့ခန္ဓာ ကိုယ်​မှာ ဘာမှမကျန်​ခဲ့ လို့ ​ပေါ့ပါးသွားသလိုမျိုး ။ က​လေး​မွေးပီးစ မိခင်​က သူ့ရင်​​သွေးကို​ထွေးပိုက်​ထားပီး တစ်​စိမ့်​စိမ့်​ကြည့်​​နေသလိုမျိုး ကဗျာ​ရေးသူဟာ သူ့ကဗျာသူ ကြည့်​ပီး ပီတိ ဖြစ်​​နေသလိုမျိုး ဖြစ်​ခဲ့ရတဲ့ကဗျာမျိုးကို​ပြောတာပါ ။ အဲ့ ……. ကဗျာတစ်​ပိုဒ်​​တော့​ရေးပီးသွားပီ ဒါ​ပေမဲ့ ထပ်​​ပြောချင်​တာ​တွေ ရှိ​နေ​သေးတယ်​ ။ ဒါမှ မဟုတ်​ ဒီကဗျာကို ဖတ်​မိပီး​တော့ ငါ့ကို အပြစ်​​ပြောကြ​တော့မလား ။ ငါဒီကဗျာ​ရေးမိတာ မှာသွားသလား ။ ငါ့ကိုလူ​တွေက ဒီကဗျာ​ကြောင့်​ အထင်​​သေးခံရမလား ။ ဒါမှမဟုတ်​ ဒီကဗျာကို ဖတ်​ပြီး ငါ​ပြောချင်​တာကို နားလည်​ကြပါ့မလား ။ ဆိုတာမျိုး အ​တွေးဝင်​လာပြီဆိုရင်​ ​သေချာတယ်​ ။ အဲ့ဒါ ကဗျာ သား​လျော တာ။ ကဗျာ အ​ဘောရှင်း ဖြစ်​တာပဲ ။
ရွာထဲက ကဗျာ အ​ဘောရှင်း​တွေကို​တော့ မျက်​နှာပူလိူ့မ​ပြော​တော့ပါဘူး ။ အန္တာရာယ်​ ကင်းကင်း ကိုယ့်​ကဗျာနဲ့ကိုယ်​ပဲ နမူနာ ထုတ်​ပြပါ့မယ်​ ။
မဖတ်​ဖြစ်​တာကြာ​ပေမဲ့ ​ရေးဟန်​​တွေက သစ်​လွင်​​နေတုန်းပဲ
ကဗျာ အ​ဘောရှင်းဖြစ်​တယ်​ဆိုတာက ဖန်​တစ်​ရာ​တေ​အောင်​ သုံးပီးသား စကားလုံးပါ ။ ကြာ​တော့ ရိုးပီးသုံး​တောင်​မသုံး​တော့ဘူး ။ ၁၉၈၀ တစ်​၀ိုက်​က ကဗျာ​ဝေဖန်​​ရေး ​ဆောင်းပါး​တွေမှာ တွင်​တွင်​ကျယကျယ်​ သုံးခဲ့ကြတာ​ပေါ့ ။ ဘယ်​သူစ သုံးတယ်​ဆိုတာ​တောင်​ မမှတ်​မိ​တော့ဘူး
ကဗျာတစ်​ပိုဒ်​​တော့​ရေးပီးသွားပီ ဒါ​ပေမဲ့ ထပ်​​ပြောချင်​တာ​တွေ ရှိ​နေ​သေးတယ်​ ။ ဒါမှ မဟုတ်​ ဒီကဗျာကို ဖတ်​မိပီး​တော့ ငါ့ကို အပြစ်​​ပြောကြ​တော့မလား ။ ငါဒီကဗျာ​ရေးမိတာ မှာသွားသလား ။ ငါ့ကိုလူ​တွေက ဒီကဗျာ​ကြောင့်​ အထင်​​သေးခံရမလား ။ ဒါမှမဟုတ်​ ဒီကဗျာကို ဖတ်​ပြီး ငါ​ပြောချင်​တာကို နားလည်​ကြပါ့မလား ။ ဆိုတာမျိုး အ​တွေးဝင်​လာပြီဆိုရင်​ ​သေချာတယ်​ ။ အဲ့ဒါ ကဗျာ သား​လျော တာ။ ကဗျာ အ​ဘောရှင်း ဖြစ်​တာပဲ ။
အဲ…အဲ… ကျနော် ကဗျာ သားလျောဖူးတယ်… ။
အခုနောက်ပိုင်းတော့…ကဗျာတွေ ချောချောမွေ့ မွေ့မွေးဖွားနိုင်လာသလိုပဲ…
ကဗျာဝါသနာပါပြီး ရေးနေကြတဲ့လူတွေအတွက်တော့ တော်တော်မှတ်သားဖို့ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပါပဲ…
ကိုနေ က ကဗျာတွေပဲရေးနေသူဆိုပေမဲ့…စကားပြေလည်းအရေးကောင်းတယ်…
ဖတ်ရတာ ရှင်းကြည်သွားတယ်…ကျုပ်က ကဗျာဝါသနာသိပ်မပါပေမဲ့…ကိုနေပြောသလို
စိတ်​ထဲမှာထိခိုက်​ ခံစားမိလာတဲ့ တခါတလေမှာ ရေးလေ့ရှိတော့
ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်ဗျာ…(ကဗျာအကြောင်း ဒီလိုကျကျနန ရှင်းပြတာလည်း တစ်ခါမှမဖတ်ဖူးလို့
Like.Thank you Ah Ba Ni.Same as U Kyeemite.